कसरी बनाउने सुरक्षित घर ?
थाहा छ कसरी हुन्छ नक्सा पास ? जग हाल्न कस्तो कुरामा दिनुपर्छ ध्यान ?
| 2018-02-25 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | भूकम्प गएको झण्डै ३ वर्ष भइसकेको छ । तर, भूकम्पपीडित भने कसरी सुरक्षित घर बनाउने, जग कसरी हाल्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योलमै देखिन्छन् ।
अधिकांश पीडितले सरकारले दिएको अनुदान सोही समस्याले गर्दा घर बनाउनका लागि खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ।
बिना जानकार घर बनाउँदा कतै ०७२ वैशाखकै अवस्था दोहोरिने त हैन भन्ने पीडितलाई लागेको छ । यसकारण प्राविधिक रूपमा सन्तुलित, बलियो र सुरक्षित घर निर्माण गर्नेतर्फ सबैको चासो बढेको छ ।
सरकारले दस वर्ष अघि नै भवन संहिता लागू गरेता पनि अत्यन्त थोरै मानिसले मात्रै सो संहिता कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । त्यसपछि, सरकारले भूकम्पलगत्तै नयाँ भवन संहिता लागू गरेको छ ।
भवन निर्माण गर्दा भवन संहिताका शर्तहरू पालना गरेर घर बनाउनु अनिवार्य समेत गरिएको छ । नयाँ संहिता लागू भएपछि पनि आम मानिस अझै यस विषयमा अनविज्ञ छन् ।
दुरदराजका गाउँठाउँमा भने प्राविधिक अनुगमनका लागि इन्जिनियरहरु समेत नपुगेको अवस्था छ ।
यी कारणले गर्दा पीडितहरुमा कसरी जग्गा छनोट गर्ने, नक्सा कसरी पास गर्ने, जग कसरी हाल्ने भन्ने विषयमा अन्योलता रहेको छ । प्राविधिक सल्लाहसहित मापदण्डअनुसारको आवास बनाउन अति आवश्यक हुन्छ ।
घर पटक–पटक बनाइ नरहने हुँदा लामो समयसम्म टिकाउ हुने बलियो जग, गाह्रो भएको घर बनाउन सक्नुपर्दछ ।
सर्वप्रथम घरको नक्सा बनाउँदा लम्बाइ, चौडाइ र उचाइको अनुपात मिलाउनुपर्छ । थोरै जग्गामा अग्ला घर बनायो भने भुइँचालोको सानो झट्काले पनि भत्किन सक्छ ।
मापदण्डअनुसार कुनै ठाउँमा पनि घरको चौडाइको साढे दुई गुणाभन्दा ठूलो घर बनाउन पाइन्न ।
सो नियमअनुसार जतिसुकै बलियो संरचना बनाए पनि १२ फिट चौडाइ जग्गा छ भने तीनतलेभन्दा ठूलो बनाउनु पनि धरापै हुन्छ । नगरपालिकाले उक्त प्रवृत्तिमा बन्देज लगायता पनि कार्यान्वयन भने हुन छैन ।
घरमा कम्तीमा दुईवटा मूलढोका हुनुपर्छ । त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो फराकिलो र सुरक्षित हुन जरुरी छ । भर्याङ जहिल्यै फराकिलो र बलियो बनाउनुपर्छ ।
कस्तो बनाउने जग ?
के–के कुरामा हुनुपर्छ ध्यान ? जग बलियो हुनुपर्छ भन्ने विषयको ज्ञान सबैलाई छ । तर, कस्तो जग बलियो भन्ने विषय अतयन्तै जटिल छ ।
पिलर सिस्टमको घरमा कति गहिरो जग बनाउने, कत्रो हात्तिपाइले (पिलर सिस्टम) बनाउने डन्डी कसरी बाँध्नेजस्ता निर्णय असाध्यै जटिल छ । हचुवा भरमा गहिराइ, लम्बाइ, चौडाइबारे भन्न सकिन्न ।
जग खन्दा भेटिने माटोको प्रकार, घरको तल्ला, पिलरको आकार, लम्बाइ, चौडाइको आधारमा गहिराइ निर्धारण हुन्छ । घरको प्रयोजन के हो त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
उत्रै आकारप्रकारको आवासीय घर र विद्यालय भवनको जगको गहिराइ तथा अरू सामान भिन्न हुन्छ ।
आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइने दुईतले घरको जग माटोको प्रकारअनुसार ३ देखि ५ फिटसम्म भए पुग्छ ।
पिलर सिस्टमको घरको जग हात्तीपाइले हो । डन्डीको जाली बुनेर ढलाइ गरेर हात्तीपाइले बनाइन्छ। हात्तीपाइलेको लेभल जहिले पनि एक सय असी डिग्रीमै हुनु आवश्यक छ ।
कस्तो जमिनमा बनाउने घर ?
भुँइचालोले जमिन नै थरकाउने भएकाले जमिन नै बलियो हुन जरुरी छ । आफूले आवास निर्माण गर्न लागिएको जमिन कतिको बलियो छ, कस्तो ठाउँमा छ, यस्ता कुरा थाहा पाउन अत्यन्त्रै जरुरी हुन्छ ।
जमिन फरक– फरक किसिमका हुने हुँदा पानि नजम्ने जग्गा हुनुपर्ने बताउँछन्, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर सञ्जीव रोकाहा ।
भिरालो, पहिरो जाने खालका जग्गा तथा खोलका बगरमा घर बनाउनु अनुपयुक्त हुने भन्दै रोकाहाले जग्गाका आधारमा जग बलियो हुने/नहुने निर्धारण हुने बताए ।
कस्तो छ कृषकको बुझाइ ?
घर कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नमा काभ्रे पाँचखालका हिरानाथ अधिकारी भन्छन्, ‘पहिला जगको लम्बाइ नट गरेर ३/३ फिट राखेर सिमेन्टले प्लास्टर गरी फलामको अंकुसे पारेर तारले बाँधी डिबिसि गनुपर्छ ।’
त्यसपछि २/२ वटा फलाम तेर्साएर बिचमा फलाम अंकुसे पारेर राख्नुपर्छ र ठाडो पारेर रड हाली माथि मुसी/घ्याल्चीलाई क्याप्चर गरेर गेयर गनुपर्छ ।
‘ढोकालाई पनि फलाम अंकुसे पारेर बलियो गरेर बाँध्नुपर्छ’ अधिकारिले भने ‘यसो नगरिए कमजोर भएर ढोका/झ्याल खस्ने सम्भावना रहन्छ ।’
२ फिट गारो लगाइसकेपछि राखिएको ढोका नजिकै झ्याल नराख्न उनको सुझाव छ । अधिकारी भन्छन्,‘ ढोकाभन्दा ३ फिट पर झ्याल राख्नु पर्छ र ढोका ६/७ फिट अग्लो हुनुपर्छ ।’
घरको छानो छाउँदा मुसी/घ्याल्चीसहित राख्दा घर बलियो हुने, हुरी बतासले नउँडाउने उनको दाबी छ । छनोट गरिएको जमिनमा घर बनाउनु पूर्व दक्ष प्राविधिकको सल्लाह लिनु पर्ने बताउँछन् उनी ।
यस गर्दा भविष्यमा आइपर्ने खतराबाट पनि बच्न सकिने र कित्ता कट्न समेत सहज हुने उनको भनाइ छ । यसैगरी, भवनको नक्सा पास पनि एक महत्वपूर्ण विषय हो ।
जसको प्रक्रिया देशभर स्थानीय स्वायत्त ऐन २०५५ अनुसार लागू हुन्छ ।
केके हुन् आवासीय तथा व्यापारिक प्रयोजनका भवन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया ?
१. अमिनबाट बाटो वा प्रस्तावित बाटो र जीएलडी (गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट) जाँच गर्ने
५. शुल्क बुझाउने (शुल्क प्रति वर्गफिटआवासीय भवनलाई २५ रुपियाँ र व्यापारिक प्रयोजनका भवनमा ३५ रुपियाँ लाग्छ ।)
१३. जाँच गरेको फाइल स्वीकृत गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्ने
यी हुन् भवन नक्सा पास गर्नका लागि चाहिने आवश्यक कागजात
– जग्गाको मालपोत तिरेको प्रमाणपत्र समेत सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ
आवासीय भवनको नक्सा पास हुन तथा निर्माण स्वीकृति पाउन सरकारले तोकेको आधारभूत शर्त
आइतबार १३, फागुन ०७४